Qorshaha elektaroonigga ee Bariga Dhexe ee Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiga Dhexe Menu Bariga
Dugsiga Hoose (Fasallada K-5)
Dugsiga Dhexe (Fasalada 6-8)
Dugsiga Sare (Fasalada 9-12)
Isqorista Ka baxsan Degmada
Koorsooyinka Dheeraadka ah (Fasallada 9-12)
U soo wac dalabyada iyo soo-jeedimaha
Kheyraadka Cuntada Xagaaga
Tennis Gabdhaha MHS
Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga
Minnetonka Dugsiga Dhexe Qorshaha E-Barashada Bariga
Laga bilaabo Abriil 6, 2020
Waxbarista waxaa lagu bixin doonaa ugu horreyn iyadoo la adeegsanayo ipad-yada iyo barnaamijka cilmiga degmada. Degmadu waxay leedahay waayo-aragnimo ballaaran oo ay ku bixiso barashada khadka tooska ah iyadoo loo marayo Tonka Online, barnaamijka elektaroonigga ah ee Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Tani macnaheedu maaha inay ardaydu ku sii jiri doonaan tiknoolajiyad dhan waqtiga oo dhan, laakiin waa inay lahaadaan isku dheelitirnaan waqtiga oo ku saabsan Schoology oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka loo dhiibo tiknoolajiyad la'aan.
Ardayda ku jirta Fasalada 5-12 waxay horeyba u haysteen Ipad si ay u isticmaalaan maalin kasta, waxayna aad u yaqaanaan isticmaalkooda waxbarida iyo qabashada shaqada iskuulka.
Ardayda iyo macallimiintu waxay raaci doonaan jadwalka fasalka ee ardaydu ku qaadan lahaayeen dugsiga waxayna qorsheynayaan inay yeeshaan nasashooyin isku mid ah, qado iyo guud ahaan maalinta iskuulka ay lahaan lahaayeen haddii ay ku jiraan dugsiga.
Kheyraadka Caafimaadka Maskaxda iyo Dareenka
Liiska Hubinta elektaroonigga ah ee Waalidka
Tiknoolajiyada iyo ilaha waxbarasho ee elektarooniga ah
Maalin kasta waxaan ku dhejin doonnaa foomka xaadiriska ah bogga daraasadda Schoology ee ardayda si ay isu muujiyaan
Waxaan dib u eegi doonnaa foomkaan maalin kasta si aan u aragno cidda aan saxiixin sida hadda la joogo, hubi inaan aragno haddii ardaydaasi ay muujiyeen caddeyn kale oo joogitaan maalintaas (gudbinta shaqada, ku dhajinta guddiga dooda, iwm.) xafiiska imaanshaha
Xafiiska xaadiritaanka ayaa ogeysiin doona waalidiinta maalin kasta in ilmahoodu uusan muujin caddeyn joogitaan, ama ku lug lahayn barashada elektarooniga maalintaas
Shaqaalaha dugsigu waxay kormeeri doonaan heerarka kaqeybgalka ardayda waxayna la xiriiri doonaan waalidiinta haddii aan aragno isbeddel arday oo aan ku howlanayn waxbarashadooda elektaroonigga ah
Ardayda MME waxay la socon doonaan jadwalkooda caadiga ah maalin kasta, in kasta oo ay inta badan lahaan doonaan xoogaa dabacsanaan ah markay go'aansanayaan goorta ay qabanayaan shaqada fasal kasta.
Jadwalka maalinlaha ah ee barashada elektaroonigga ah ee cunuggaagu waa inuu u ekaadaa sidan:
Diyaar u noqo oo diyaar ahaw, xarunta shaqada gurigaaga 9:00 subaxnimo maalin kasta
Waxyaabaha ugu horreeya ee la sameeyo maalin kasta:
Tag foomka xaadiritaanka ee ku jira bogga heerka fasalka Schoology oo adigu iska xaadir adigoo jooga
Ka hubi Schoology mid kasta oo ka mid ah fasalladaada si aad u aragto cidda u qorsheysay hawl toos ah oo toos ah maalintaas, samee xusuus-qor si aad u joogtid Schoology bilowga muddadaas fasalka gaarka ah
Qorsheeyahaaga, ku qor "To Dos" mid kasta oo ka mid ah fasalladaada maalintaas
Dib u eeg “To Doos” maalintaas isla markaana mudnaanta sii waxa laga shaqaynayo marka hore
Dhamaadka maalinta dugsiga elektaroonigga ah, dib-u-eeg liistada maalinlaha ah ee "To Do", soo gudbi wixii shaqooyin ah ee lagugu leeyahay, ku qor qorshahaaga "To Dos" maalinta ku xigta
Macallimiintu waxay duubi doonaan oo dhajin doonaan dhammaan waxqabadyadooda tooska ah ee tooska ah ee loogu talagalay ardayda maqnaanshaha, oo leh arrin tiknoolaji ah, daawashada walaalka, kormeerka iwm.
Jadwalka maalinlaha ah ee soo socda ee ardayda waxaa lagu dhejin karaa shaashadda gurigooda iyo / ama agagaarka goobtooda shaqada:
Xaashida Qorshaynta elektarooniga ah
Websaydhka 'Minnetonka Public Schools' ee Fayo-qabka Ardaygu wuxuu hayaa liistada fayoobaanta iyo isku-xirnaanta caafimaadka maskaxda ee bulshada deegaanka oo ay ku jiraan lambarrada khadka tooska ah ee laga yaabo inay adiga iyo qoyskaaguba waxtar u leeyihiin. Halkan guji si aad u aragto Kheyraadka Bulshada .
Khadadka dhibaatooyinka degmada, khadadka qoraalka dhibaatooyinka iyo ilaha loogu talagalay kuwa u baahan gargaarka degdegga ah, waxaad booqan kartaa websaydhka NAMI Minnesota .
Kheyraadka Dheeraadka ah ee Maareynta Cadaadiska
Sida loo ilaaliyo caafimaadka maskaxdaada inta lagu jiro karantiil
Maareynta Cadaadiska iyo Walaaca - CDC
Barnaamijyada ay soo jeedisay Warbaahinta 'Common Sense' si ay u taageeraan caafimaadka maskaxda
Jooji, Ka fikir, Neefsashada App oo laga heli karo is-adeegsiga iPad-ka
Dhibaatada Guud Qoys ahaan
Hawlaha onlaynka ee barnaamijka xasilloon
Yoga iyo fiidiyowyo feker ah oo lagu hago YouTube
Gal Naviance ee SSO si aad u sahamiso xirfadaha / fursadaha dugsiga sare kadib
Ku tababbaran Caafimaadka Dijital & Fayoqabka, sida dejinta xadadka waqtiga shaashada
Websaydhka Dijital Caafimaadka & Fayoqabka ayaa sidoo kale leh fiidiyoow macluumaad iyo caawinaad leh oo ka hadlaya cunista waxyaabaha ku jira taleefankaaga, ka-fiirsashada, nadiifinta booskaaga, ku-mashquulida hiwaayadaha aad jeceshahay, iwm
Hubso in ilmahaagu leeyahay meel shaqo oo joogto ah oo gurigaaga ka mid ah
Ilmahaaga dib ugula eeg liistada elektaroonigga ah Su'aalaha Weydiinta ee hoos ku qoran oo fiiri fahamka
Iyagu ha ku dhex socdaan socodkooda maalinlaha ah ee elektaroonigga ah
Sidee ayay u hubin doonaan fasaladooda subax kasta
Sidee ayey u adeegsan doonaan qorsheeye si ay u sameeyaan qorshe maalinle ah “To Do’
Sidee ayey mudnaanta u siin doonaan shaqada maalin kasta
Sidee ayey ula socon doonaan kal-fadhi kasta oo toos ah oo toos loo qorsheeyo maalintaas
Maxay barayaashoodu soo dhajiyeen usbuucii la soo dhaafay oo ah waxqabadyo "ku celcelin ah"
Hubso inay haystaan jadwalka fasalka maalinlaha ah ee MME oo la daabacay ama lagu dhajiyay meel ku habboon oo si fudud looga heli karo saldhigooda shaqada
Hubso inay haystaan nidaam abaabul / nidaam qorsheeye oo loogu talagalay barashada elektaroonigga ah
Hubso inay fahamsan yihiin sida loola xiriiro macallimiintooda iyo la-taliyahooda iyagoo adeegsanaya Fariinta Schoology
U diyaari qorshe 5 - 10 daqiiqo daqiiqad walboo baaris ah halkaasoo ay ku tusi doonaan caddeyn muujineysa inay ku howlan yihiin ayna abaabuleen shaqadooda iskuulka elektaroonigga ah.
Tilmaamaha Tilmaamaha Tilmaamaha
Fur xiriirinta hoose si aad u aragto tilmaamaha loogu talagalay ardayda iyo waalidiinta aaladaha tikniyoolajiyadda ee loo adeegsado e-barashada Minnetonka.
TILMAAMAHA FARSAMADA FARSAMADA
Miiska Caawinta Qoyska weli wuu furan yahay taleefan ahaan (ka tag fariin) 952-401-5123, ama iimayl u dir Qoyska.Helpdesk@minnetonkaschools.org . Waxay soo celinayaan wicitaanada markii loo baahdo, haddii kale waxay ku jawaabayaan emayl iyo habka tikidhada casriyeynta / tigidhada. Haddii dayactir loo sameeyo ipadka loo baahan yahay, waalidku waa inuu buuxiyo foomkan:
Foomka Dayactirka iPad-ka
Bandwidth iyo WiFi
Fadlan ogow in tiro ka mid ah bixiyeyaasha internetka ay ka shaqeynayeen sidii ay u bixin lahaayeen qorshooyin Internet oo jaban. Macluumaadka qaar ka mid ah kuwan waxaa laga heli karaa halkan: https://tinyurl.com/tonkawifi .
Intaas waxaa sii dheer, iskuulada ku yaal Minnetonka oo dhan waxay u dirayaan calaamadda WiFi marinka wadista ee xagga hore ee dugsiga.
Arimaha Kale ee Tech
Ardaydu waxay la xiriiri karaan takhasusyadooda warbaahinta si ay u taageeraan iyaga oo gujinaya isku xidhka MME / MMW Media kaas oo lagu dhejin doono heer kasta oo ah bogga Schoology. Xiriiriyahaani wuxuu ku xirayaa iyaga oo adeegsanaya shirarka fiidiyowga ee Google Hangout iyo shaqaalaha kaa caawin kara xallinta dhibaatadooda Haddii aadan haysan tikniyoolajiyad aad ku sameyso tan, wac xafiiska weyn ee MME ama MMW.
Ingiriisku miyaanu ahayn luqadda hooyo ee qoyskaaga? Raadi ilo ku saabsan sida loo turjumo bogga internetka, emayllada, pdfs iyo wax badan oo luqadaha aan Ingiriisiga ahayn.
Eeg Kheyraadka Tarjumaadda
Su'aalaha Inta Badan La Weydiiyo Qoysaska MME
Dugsiga Dhexe ee Minnetonka Bariga wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato ku qabtid barashada elektarooniga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.
Qaybaha elektaroonigga ah
Waa maxay barashada elektaroonigga ah?
Maalmaha "e-Learning" waa maalmo iskuul oo ay macallimiintu ku soo bandhigaan khibradaha waxbarasho ee elektarooniga ah iyagoo adeegsanaya Nidaamka Maareynta Barashada Schoology
Goorma ayey macallimiintu kala xiriiri doonaan ardayda waxyaabaha laga filayo elektaroonigga ah?
Macallimiintu waxay u isticmaali doonaan maalinta ugu horreysa e-barashada sidii waqti ay ugu dejiyaan waxyaabaha laga filayo ardayda iyadoo loo marayo Schoology. Tilmaamaha ayaa la bixin doonaa oo ku saabsan waxyaabaha laga filayo deegaankan e-barashada, ee ku saabsan laakiin aan ku xaddidnayn:
Wakhtiga kama dambaysta ah
Sida loo waydiiyo su'aalaha ama loo helo caawimaad dheeraad ah
Imaanshaha miyaa loo qaadan doonaa maalin e-waxbarasho?
Haa, xaadiritaanka waa la qaadan doonaa maalin kasta ardayda waxaa looga baahan doonaa inay soo buuxiyaan foomka xaadiritaanka maalin kasta iyadoo caddayn u ah inay ku hawlanaayeen barashada elektaroonigga maalintaas. Shaqaalaha iskuulka ayaa la socon doona waalidiinta hadii ay ogaadaan qaab maqnaansho ama kaqeybgal la'aan taasoo tilmaamaysa in ardaygu uusan kuqasbanayn barashada elektaroonigga ah.
Ardayda ma looga baahan karaa inay khadka tooska ah ka isticmaalaan wakhti cayiman?
Haa, ardayda waxaa laga filayaa inay goobjoog ahaadaan inta lagu jiro jadwalka kal-fadhiga “tooska loogu tabinayo” ee uu bixiyo macallinkoodu. Maalmaha aan fadhiyada "tooska loo baahin", ardayda waxay lahaan doonaan dabacsanaan shuruudaha internetka. Wali waxaa laga filayaa inay dhameystiraan shaqada loo xilsaaray mid kasta oo ka mid ah fasaladooda.
Ka waran haddii ardaydu leeyihiin duruufo soo jiitama (sida daawashada walaalaha, iwm.)?
Xaaladahaas oo kale, ardayda iyo qoysaska waa inay si firfircoon ula sameeyaan qorshooyin kale macalimiinta iyo lataliyayaasha iyagoo ku saleynaya xaalada iyo baahidooda.
Muddo intee le'eg ayay ardaydu ku jiri doonaan fasal kasta?
Ma jiraan qaddar loo qoro oo ah waqtiga fasalka ee laga filayo ardayda. Ardayda waxaa looga baahan yahay inay hubiyaan Schoology maalin kasta wixii macluumaad ah ee ku saabsan koorso kasta. Macalimiintu waxay u soo gudbin doonaan waxyaabaha laga filayo casharka maalin kasta. Mar labaad, ardaydu waxay raaci doonaan jadwalkooda maalinlaha ah ee dugsiga waxayna dhammayn doonaan dhammaan shaqooyinka loo igmaday.
Dabacsanaan intee le'eg ayay ardaydu ku leeyihiin jadwalkooda maalinlaha ah?
Ardaydu waa inay raacaan jadwalkooda maalinlaha ah maxaa yeelay macallimiintu waxay qaban doonaan kal-fadhiyo "live live" kal-xilliyeed inta lagu jiro xilliyada fasalka caadiga ah. Ardaydu waa inay iska xaadiriyaan bogga Schoology ee mid kasta oo ka mid ah fasalladooda waxa ugu horreeya subaxnimada si loo arko fasallada loo qorsheeyay casharrada "socodka tooska ah" maalintaas. Fasallada aan "toos u socon" maalintaas, ardayda waxay lahaan doonaan dabacsanaan marka ay diiradda saarayaan fasalkaas. Haddii ardaydu aysan awood u lahayn inay ka qaybqaataan mid ka mid ah fasalladooda sabab macquul ah (daryeele walaal), waxay u baahan yihiin inay la xiriiraan macallinkooda.
Ardaydu ma awoodaan inay horay uga shaqeeyaan fasalladooda?
Haa, inta macallinka u oggolaado. Tani waxay u baahan tahay xiriir toos ah oo lala yeesho macalinka koorsadaas.
Goorma ayaa meeleynta iyo shaqada kale ee fasalka laga heli doonaa koorsooyinka Schoology?
Macallimiintu waxay heli doonaan casharro bilowga muddada fasalka loo qoondeeyay maalin kasta.
Waa maxay waqtiga kama dambaysta ah ee shaqada lagu dhammaystiray maalinta elektaroonigga ah?
Waqtiga kama dambaysta ah ee dhammaystirka shaqada waxaa go'aamin doona oo si cad u sheegi doonaa macallinka. Macallimiintu waxay ardayda siin doonaan waqti ku filan oo ay ku dhammaystiraan meeleynta taas oo laga yaabo inay ka badato sidii caadiga ahayd ee fasalka lagu siin lahaa.
Sidee culeyska shaqada ee fasalku ugu wareejinayaa deegaanka e-waxbarashada?
Macallimiintu waxay u xilsaari doonaan shaqada elektiroonigga ah inay si macquul ah u qiimeeyaan aqoonta bartilmaameedyada waxbarasho ee lagama maarmaanka u ah koorso kasta. Macallimiintu waxay kormeeri doonaan socodsiinta barashada elektaroonigga ah iyo filashada culeyska shaqada si loo hubiyo culeys shaqo oo macquul ah oo loogu talagalay ardayda jawigan cusub ee e-barashada.
Maxay ardaydu sameeyaan haddii ay ka diiwaangashan yihiin fasal aan muhiim ahayn?
Macallimiintu waxay sii wadi doonaan inay bixiyaan waxbarid la jaanqaadaysa barashada lagama maarmaanka ah ee dhammaan koorsooyinkan; waxay umuuqan doontaa wax yar uun sidii hore. Macalimiintu waxay dhajin doonaan waxyaabaha laga filayo iyo ilaha waxbarasho maalin kasta.
Sidee ardayda loo imtixaanaa?
Imtixaanada oo dhami way sii socon doonaan si ay ula jaan qaadaan tilmaamaha. Tani waxay ka dhigan tahay in imtixaanada qaar laga qaadi doono qadka, iyadoo qeyb ka ah deegaanka barashada elektarooniga ah, halka imtixaanada kale laga qaadi karo fasalka marka dugsiga lagu soo laabto, iyadoo ku xiran dhererka iskuulka la xirayo Macallimiintu waxay ardayda kula xiriiri doonaan iyagoo adeegsanaya Schoology oo ku saabsan dhammaan taariikhaha qiimeynta iyo filashooyinka.
Ka waran haddii ardaydu leeyihiin dib-u-qaadis ama imtixaanno u baahan in la dhammaystiro?
Ardaydu waa inay la hadlaan macallinkooda si ay u sameeyaan qorshooyin shaqsiyeed.
Sidee ardayda loo qiimeynayaa?
Macallimiintu waxay sii wadi doonaan buuga buundadooda Schoology si ay uga tarjumaan barashada ardayga ee lagu dhammaystiray barashada elektaroonigga ah. Macallimiintu waxay beddeli karaan meeleynta ama qiimeynta ka dhacda deegaanka e-waxbarashada.
Sidee ardayda ula xiriiri karaan macallimiinta?
Ardaydu waxay kula xiriiri karaan macallimiinta farriinta Schoology ama emayl.
Goorma ayay ardaydu awoodi doonaan inay la xiriiraan macallimiinta iyo shaqaalaha?
Macallimiinta iyo shaqaalaha taageerada (la-taliyayaasha, maamulayaasha, shaqaalaha bulshada, maareeyayaasha kiisaska waxbarashada gaarka ah) ayaa la heli doonaa Isniinta - Jimcaha laga bilaabo 8: 15-4: 15. Fadlan maskaxda ku hay in Macallimiintu ay "wax barayaan" inta lagu jiro saacadaha joogtada ah ee jadwalkooda ah.
Goorma ayay ardaydu ka filan karaan jawaab macallimiinta iimaylka ama Schoology?
Ardaydu waxay filan karaan inay ka maqlaan macallimiinta inta u dhexeysa saacadaha 8: 15-4: 15. Ardaydu waxay la xiriiri karaan macallimiinta saacadahaas wixii ka baxsan, laakiin waa inay filayaan jawaabo inta u dhexeysa xilliyadaas.
Ka waran haddii ardaydu la xiriiraan macallinkooda oo macallinka aan la heli karin (tusaale ahaan jiran)?
Haddii ay dhacdo jirro macallin, maalin kasta cusbooneysiinta cilmiga cilmiga ayaa wali la bixin doonaa waxbarashaduna way sii socon doontaa. Macallimiinta keydka ah, ee ay ku tababartay degmadu barnaamijkeenna elektaroonigga ah, ayaa la heli doonaa si ay u sii wadaan bixinta khibradaha ku habboon e-barashada.
Ka waran haddii ardaydu jiran yihiin? Waalidiinta miyaa laga filayaa inay wacaan khadka xaadiritaanka?
Waalidiintu waa inay sii wadaan ku xirnaanshaha Skyward Parent Access haddii cunugaaga jiran yahay oo uusan awoodin inuu kaqaybqaato e-Learning. Waxaa laga filayaa inay ardaydu sameeyaan wax kasta oo ay awoodaan si ay ula qabsadaan markay ku noqdaan "iskuulka". Way fiicnaan laheyd waalidiinta inay la xiriiraan macallinka iyo lataliyaha haddii maqnaanshuhu uu sii dheeraado dhowr maalmood.
Sidee ardayda ula xiriiri karaan ardayda fasalkooda?
Macalimiintu waxay iskaashi la sameyn doonaan ardayda si ay ugala hadlaan fursadaha wada shaqeynta ardayda kale ee jawiga elektaroonigga ah. Tani waxay ku dhici doontaa iyadoo la adeegsanayo Shirka Schoology iyo Google Hangout.
Sidee ardaydu ula xiriiri karaan la-taliyahooda, ama Shaqaalaha Bulshada?
La-taliyayaasha iyo shaqaalaha bulshada waxaa laga heli karaa 8: 15-4: 15. Ardaydu waa inay marka hore kula xiriiraan iyaga oo adeegsanaya emayl ama Schoology Messenger. Kulamada dabagalka ah ayaa si wada jir ah loo go'aamin doonaa kuwaas oo ka mid noqon kara Google hangout oo ah hab wajiga iyo wejiga isdhexgalka.
Sidee ardaydu ula xiriiri karaan maareeyaha kiiskooda Waxbarashada Gaarka ah?
Adeegyada Waxbarashada Gaarka ah iyo IEPs waxay sii wadi doonaan helitaanka waxbarid buuxda, oo ay kujiraan waafajin, barxadeena barashada elektarooniga ah. Macallimiinta waxbarashada gaarka ah iyo xirfad-yaqaannada takhasuska leh ayaa ka faa'iideysan doona ilaha waxbarasho ee kala duwan iyo aaladaha isgaarsiinta si ay u bixiyaan waxbarid shaqsiyeed iyo in ay wax ka qabtaan yoolalka IEP ee jira iyo iswaafajinta. Ardaydu waxay taageero ka heli doonaan maareeyayaasha kiisaska, macallimiinta fasalka, iyo xirfadlayaasha takhasuska leh. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerada iyo adeegyada IEP waxaa lagula socodsiin doonaa Waaxda Adeegyada Ardayda. Haddii aadan helin isgaarsiinta dheeriga ah, fadlan la xiriir maareeyaha kiiskaaga.
Ballan uu la yeesho lataliyaha ardaygu muxuu u ekaan doonaa?
Ardayda iyo waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waa inay codsadaan ballan iyaga oo adeegsanaya emayl ama Fariin ay ku diraan Schoology. La-taliyaha oo kaashanaya ardayga (waalidiinta) iyo waalidiinta / mas'uuliyiinta ayaa go'aamin doona habka ugu wanaagsan ee ballantaan.
Ilaa daqiiqad cusbooneysiinta jawaabta ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ee jawaabta coronavirus (COVID-19), e-Learning iyo ilaha degmada oo dhan, fadlan booqo degelkeenna gaarka ah.
Macluumaadka elektaroonigga ah ee wax-barashada MME - Maarso 25, 2020
Dugsiyada Dhexe /